Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Archives | 2014 | October
Posted on October 31, 2014 by freeburma
သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း မိုင်းတုံမြို့နယ် ပုံပါကျင်မြို့နယ်ခွဲ အသွားလမ်းမပေါ်ရှိ တောင်ပိုင်း ဝ တပ်ဖွဲ့ ဝေ့ရှော်ယင် ပိုင်ဆိုင်သည့် နေအိမ်၊ ရာဘာခြံ၊
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1wOlkt5 http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted in Ethnics - တိုင်းရင်းသားများဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Ethnics, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်မထွက်
"ဒီလို တစ်ယောက် ၁၀ မိနစ်ပြောပြီး နောက်ဆုံး အထွေထွေ ရှိသေးလား ဆိုတာ ကတော့ အန်တီတို့ အနေနဲ့ ၄ ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို မြင်တဲ့ ပုံစံတော့ မဟုတ်ပါဘူး" ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဂျပန် သတင်းဌာန NHK သို့ ဖြေဆိုခဲ့သည်။
The post နိုင်ငံရေး ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ ရလဒ်မထွက် appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1ucpr3h http://ift.tt/1iYMpUI
Posted in Political Parties - နိုင်ငံရေးပါတီများ	| Tagged Feedly, IFTTT, Political Parties, Recently Read	| Leaveacomment |
နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ အတူ သမ္မတ ၊ ဒေါ်စု နဲ့ ကာချုပ် တွေ့ဆုံ
နိုင်ငံရေး ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကို ဒီကနေ့ နေပြည်တော်က သမ္မတ အိမ်တော် မှာ ကျင်းပပြီး နိုင်ငံရေးခါင်းဆောင် ၁၄ ဦးတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးတကြီး ဖြေရှင်းဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ သတင်းရယူထားတဲ့ ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်းရဲ့သတင်းထောက် ကိုအောင်ရဲမောင်မောင် ကပြောပြမှာပါ။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ အစုအဖွဲ့ ၅ စု က ခေါင်းဆောင် ၁၄ ရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ ကို ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်း နေုပြည်တော် သမ္မတ အိမ်တော် မှာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြတာပါ။…
via Voice of America http://burmese.voanews.com/content/political-leaders-meeting-/2503184.html http://burmese.voanews.com
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://www.thithtoolwin.com/2014/10/blog-post_9838.html http://www.thithtoolwin.com/
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Ethnics, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
ဒီနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို ထောက်ခံကြိုဆိုလိုက်ပြီး ဒီကနေတဆင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပသွားဖို့[…]
via DVB | DVB http://burmese.dvb.no/archives/69443 http://burmese.dvb.no
ဒီမိုကရေစီ အကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော်(DKBA)ဌာနချုပ် (ကော်သူးမွဲခီး)ဆုံဆည်းမြိုင်တွင်ေ
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://www.thithtoolwin.com/2014/10/kaf_31.html http://www.thithtoolwin.com/
Posted in Civil Wars - ပြည်တွင်းစစ်ဆိုင်ရာ	| Tagged Civil Wars, Feedly, IFTTT, Recently Read	| Leaveacomment |
နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတအိမ်တော် ငုရွှေဝါခန်းမတွင် ဒီနေ့ ကျင်းပခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးဝိုင်းမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ တပ်မတော်အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
The post “အများစုနဲ့ အနိုင်ယူခြင်းအစား လူနည်းစုရဲ့ ဆန္ဒတွေကို အလေးထား”ရန် ကာချုပ် တိုက်တွန်း appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://burma.irrawaddy.org/short-news/2014/10/31/66597.html http://ift.tt/1iYMpUI
ကေအဲန်ယူ၏ သဘောထား ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် UNFC ကြိုဆို
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)က ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ မူလအတိုင်း ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည့်အခြေအနေနှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်နေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အပေါ် UNFC က ကြိုဆိုလိုက်သည်။
UNFC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ခူးဦးရယ်က “ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ အပေါ်မှာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကိုတော့ လေးစားရမှာပါ။ နောက်ပြီး အစဉ်သဖြင့် UNFC ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ ဆိုတဲ့စကား ကြားရတာ ၀မ်းလည်းဝမ်းသာသလို ကြိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
၎င်းအပြင် UNFC ချမှတ်ထားသည့် မူများမှာ အဖွဲ့အစည်းအများစု သဘောတူလက်ခံသည့် မူဖြစ်ပြီး အချိန်တို အတွင်း ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသလို ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့ကာ မူအားလုံးကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် UNFC ညီလာခံက ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်ကြောင်း ခူဦးရယ်က ဆက်ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူသည် UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိရေး မရှိရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကေအဲန်ယူထိန်ချုပ်နယ်မြေ ဖားအံခရိုင်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် လေးဝါးစခန်းတွင် အောက်တိုဘာလ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် ကေအဲန်ယူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒိုစောသမိန်ထွန်းက “ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး သေချာဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ အဲလိုဆွေးနွေးတဲ့အခါ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အယူအဆ မတူတာတွေရှိတဲ့ အပေါ်မှာ ဘုံတူညီချက်တစ်ခုရှာပြီး ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကို အခုလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ”ဟု ကေအိုင်စီ သို့ ပြောသည်။
အဖွဲ့ဝင်မှ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအတွင်း ကေအဲန်ယူအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သဘောထား သည် UNFC ၏ မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသည့်အချက်များကို UNFC တာဝန်ရှိကော်မတီများနှင့် အနီးစပ်ဆုံး လက်ခံနိုင်သည့် အဖြေရသည်အထိ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ကေအဲန်ယူက ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ UNFC နဲ့ ဆက်ဆွေးနွေးမယ်။ တကယ်လို့ အဲလိုအကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးပြီး KNU မူဝါဒနဲ့ လုံးဝ ချွတ်ဇွတ်ကြီး အံဝင်ဂွင်ကျ မဖြစ်အုံးတော့ လိုက်လျောနိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြန်ဝင်မှာ ပဲ”ဟု ပဒိုစောသမိန်ထွန်းက ဆက်ပြောသည်။
၎င်းအပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမှတဆင့် အားလုံးပါ ၀င် နိုင်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အရေးပေါ်အစည်း အဝေးပြီး ကေအဲန်ယူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယခုနှစ် သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် UNFC ၏ ပထမအကြိမ် ညီလာ ခံတွင် ကေအဲန်ယူသည် UNFC အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ယာယီရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီ အရေးပေါ် အစည်းအဝေးကို ခေါ်ယူကျင်းပကာ ထွက်ရှိလာသည့်အဖြေကို UNFC က ကြိုဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
via သတင်း http://burmese.bnionline.net/index.php/news/kic/19113—-unfc-.html http://burmese.bnionline.net/index.php/news.html
Posted on October 31, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-31 08:29:15
Activists: Burma Govt Clinging to Political Prisoners RANGOON — Burma has freed more thanathousand political prisoners since former military rulers handed over power three years ago,amove that has smoothed the former pariah state’s international rehabilitation. Now the government says the job is done. Human-rights activists and the U.S. say, not so fast.President Thein Sein is preparing to disbandacommittee that determined which inmates were eligible for pardons and amnesties, even though its most outspoken member says more than two dozen prisoners still deserve to be released, includingamonk who angered many fellow Buddhists and an air force pilot who complained about mistreatment.As Burma prepares to host the Nov. 12-13 East Asian Summit, to be attended by President Barack Obama, the fate of the remaining prisoners is one of the nagging international concerns over what’s provingabumpy change to democracy, also troubled by sectarian violence against minority Muslims and the military’s continuing grip on politics.Meanwhile, jails are again filling up with hundreds of dissenters, including writers, peaceful protesters and farmers who stood up against land grabs by the rich and powerful. Among the most prominent cases: four journalists sentenced to seven years forastory aboutaweapons factory.The detentions are just part of the mixed human-rights record under Thein Sein,aformer general who was elected in 2010 to endahalf-century-long era of military dictatorship in the Southeast Asian country. Burma gained praise, and shed many international sanctions, as it lifted restrictions on speech and the press and set more than 1,300 political prisoners free. But crackdowns in recent months have revealed the limits of those changes.Early last year, at the urging of the U.S., Burma set upa“scrutinizing committee” — consisting of government officials and representatives from civil society and political parties — to determine which prisoners should be released. Now it intends to replace the committee withatask force that would be controlled by the Home Ministry — the very institution that controls prisons.One of the committee’s members, Hla Maung Shwe, said the work of the panel is now complete. The government says only true criminals remain behind bars.Bo Kyi, the committee’s most outspoken member andaformer political prisoner, disagrees. Since the late 1990s, he has compiledalist of political prisoners and supported the families of detainees. He said at least 28 are still held, and that the government has obstructed efforts to visit prisons and get information about inmates.The U.S. State Department puts the number at around 30 to 40.“Until these cases are resolved, I can’t agree with the opinion of other committee members,” Bo Kyi said. “We haven’t finished our work. We cannot forget these men.”He said the remaining junta-era inmates include:—Moe Pyar Sayardaw,a75-year-old monk arrested in 2010. He is serving 20 years in the Myitkyina prison in Kachin state for teachingaform of his faith that does not adhere to the official doctrine of the main government-controlled Buddhist body.—Air force pilot Chit Ko, serving 10 years, after arguing he was technically eligible for discharge afteradecade’s service. When his request was refused, he took his complaints to the U.N. International Labor Organization and to the Internet, angering his superiors.—Win Naing Kyaw,aformer army captain accused of planning to leak military state secrets that were discovered on his laptop duringatrip to Bangkok. He later claimed innocence, saying he only confessed after 42 days of being beaten, drugged and threatened.—More thanadozen villagers from Shan, Kachin and Karen states. Burma’s former military rulers claimed they were ethnic rebels, even though Bo Kyi said there was no evidence of that.Bo Kyi said the government considers the outstanding cases sensitive and worries that, by releasing the prisoners, it would endureabacklash from military hardliners and increasingly politically powerful Buddhist extremists.Minister of Information Ye Htut did not respond to questions from The Associated Press about remaining political prisoners. In the past he has said all of them have been freed.But it’s not justalegacy issue. New arrests and detentions continue into Thein Sein’s third year in office.Around 200 people have been detained in the last year, including peaceful protesters, journalists and activists, according to Dave Matthieson, senior Burma researcher for Human Rights Watch.Bo Kyi says another 500 to 1,000 farmers are reportedly behind bars for working land they say was unlawfully seized by the army, private corporations or cronies.“New political prisoner cases have continued to arise due to restrictive laws remaining on the books,” said Chanan Weissman, spokesman in the U.S. State Department’s bureau of democracy, human rights and labor.Yanghee Lee, the U.N. special rapporteur on human rights in Burma, reported to the General Assembly this week that the application of outdated security laws andanew flawed law on peaceful assembly serves “to criminalize and impede the activities of civil society and the media.” She said sentences imposed are “disproportionately high.”Lee cited the case of Dr. Tun Aung,acommunity leader arrested after being called in by authorities to try to help calm Rohingya Muslim crowds who were leading riots against Buddhists in northern Arakan State in June 2012. Accused of inciting the violence, he was sentenced to 17 years in jail. Thanks to strong international pressure, Tun Aung is now scheduled to be released next year.Ahead of Obama’s visit, U.S. officials are urging Thein Sein to pardon four journalists from the journal Unity who were charged underacolonial-era security law forastory in January about an alleged chemical weapons factory. They are currently appealing their seven-year sentences in Burma’s Supreme Court.The outlook looks less favorable for the junta-era detainees, particularly if scrutiny of their cases diminishes.Bo Kyi said he’s been told by the government he won’t be included in the new prisoner task force.“I’m being sidelined,” said Bo Kyi, who lives in Burma but still relies on the Czech travel documentation from his exile years. “They say it’s because I’m notacitizen, but that’s nonsense, it’s just an excuse.”
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-31 05:22:50
**ဆင်းရဲသားမြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် မော်ကျွန်းအာဏာပိုင်များရက်ရက်စက် စက်စော်ကားခဲ့လေပြီ***(မိသားစုရှိအမျိုးသမီးအားလုးံထောင်ချခြင်း)ဧရာဝတီတိုင်းမော်ကျွန်းမြို့နယ်ကျွန်းကြီးကျေးရွာတွင်တစ်မိသားစုလုးံရှိအမျိုးသမီးများအားလုးံ၊အဖွား၊အမေ၊မြေး(အပျို)များပါမကျန်မိန်မအားလုးံကို မူလလက်ငုတ်လယ်မှစပါးရိတ်သည်ကိုငွေရှင်ကြေးရှင်အလိုကျအာဏာပိုင်များ၊လယ်/စီများ၊တရားရေးများ၊ဥပဒေဆိုင်ရာအကြံပေး(ဆွဲချ)တို့ပေါင်းကာ28.10.14ကထောင်ချလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီတိုင်းမော်ကျွန်းမြို့နယ်ကျွန်းကြီးကျေးရွာမှဦးဘကောက်ဒေါ်ရီတို့၏ဘိုးဘွားပိုင်လယ် ၁၅ ဧကကိုလွန်ခဲ့သော(၃)နှစ်ကငွေကြေးအခက်အခဲကြောင့်တရွာတည်းနေငွေရှိသူဦးငြိမ်းအေးထံမှလယ်ပြန်ငွေပြန်ငွေချေးယူရာမှ၂၀၁၃ ခုနှစ်မိုးရာသီတွင်လယ်ယာမြေပြသနာဖြစ်ပွားပြီ၊ဦးအေးငြိမ်း၏တရားလိုတိုက်တန်းချက်နှင့်ကျေးရွာလယ်စီ၏ဘက်လိုက်ဆုးံဖြတ်ချက်ကြောင့်မော်ကျွန်းရဲစခန်းမှပုဒ်မ ၄၄၇/၄၂၇ တို့ဖြင့်တပ်ကာတရားစွဲပြီး မော်ကျွန်းရဲများကမူလလယ်ပိုင်ရှင် အသက်၇၀ကျော်ဦးဘကောက်နှင့်ဒေါ်ရီ၊သားဖြစ်သူဦးဗန်ကူး၊ချွေးမဒေါ်လှလှနိုင်၊မြေးဖြစ်သူကိုစောလင်း၊မြေးမိန်းခလေးအပျိုအရွယ်မကျော့ခိုင်နှင့်မချိုမာအပါအဝင်စုစုပေါင်းမိသားစု(၇)ဦးလုးံကိုဖမ်းဆီးအချုပ်ချခဲ့သည်။(၁၀)နှစ်နှင့်(၈)နှစ်အရွယ် လူမမယ်ကလေးများကိုတောင်သူးလယ်သမားရေးဆောင်ရွက်သူများကရန်ကုန်သ်ို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။ထို့နောက်တောင်သူလယ်မားအရေးဆောင်ရွက်သူများကမော်ကျွန်းမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဆွေနွေးပြီးလယ်ယာမြေပြသနာများကိုနှစ်ဘက်မနစ်နာအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါရန်လေးလေးစားစားမေတ္ထာရပ်ခံခဲသည်၊ထို့အပြင်လည်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစားလှယ်ဦးကိုကိုလွင်ထံသို့လည်းကူညီပါရန်မေတ္ထာရပ်ခံခဲ့သည်။ ပို၍ဆိုးသည်မှာဦးဗန်းကူးမိသားစုစိုက်ပျိုးထားသောစပါးများကိုအဖွား၊ဇနီးနှင့်သားသမီးမျာကစပါးရိတ်သည်ကိုမြေသိမ်းသူဦအေးငြိမ်းကရဲများ၊လယ်/စီများကပူပေါင်းကြံစည်ပြီးရာဇဝတ်မှုကြီးခိုးမှုပုဒ်မ(၃၇၉)တပ်ကာတရားစွဲခဲခြင်းဖြစ်သည်၊ ဤကိစ္စများနှင့်မော်ကျွန်းလယ်သမားများဖမ်းဆီးထောင်ချသည့်ကိစ္စများကိုရန်ကုန်တွင်သတင်းစာရှင်လင်းပွဲ့လင်းပွဲလုပ်ခြင်း၎င်းကိစ္စမျာကိုကမ္ထာ့သတင်းဌာနကြီများကအသံလွှင့်ခြင်းများကြောင့်အာဏာပိုင်များကထောင်ချပြစ်မယ်ဟုကြိမ်းမောင်းနေကြောင်းလည်းကြားသိနေရပါသည် ၂၈.၁၀.၁၄နေ့ကကိုဗန်ကူးမိသားစုမှအသက် ၇၀ ကျော်အဖွားဖြစ်သူဒေါ်ရီ၊အမေဖြစ်သူဒေါ်လှလှနိုင်၊မြေးမလေးများဖြစ်သည့်မကျော့ခိုင်နင့်၊မချိုမာတို့ကိုပြစ်မှုကြီပုဒ်မ၃၇၉ ခိုးမှု(စပါးရိတ်)မှုဖြင့်အလုပ်ကြမ်းနှင်ထောင်ဒဏ်(၆)လချလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စမှာများစွာကြေကွဲစရာကောင်းလှသည်၊မြန်မာအမျိုသမီးကောင်းများစွာ၏ဂုဏ်သိက္စာကိုပါစော်ကားခြင်းဖြစ်သည်။တောနေကျေးရွာသားများ၏ဘဝကိုဖျက်စည်းနေသောသာဓကဖြစ်သည်။ဗုဒ္စဘာသာ၏အဆုးံအမများနှင်ကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်သည်။အိမ်ရှိမိန်းခလေးလူကုန် စပါးရိတ်မှုကို သူခိုးမှုတပ်ကာတရားစွဲထောင်ချလိုက်သောပြည်ခိုင်ဖြိုးအစိုးရ၏တရားရေးစနစ်၊လူသားမဆန်သောမော်ကျွန်းအာဏာပိုင်များ၏လုပ်ရပ်က်ိုမြန်မာအမျိုးသမီးထုတစ်ခုလုးံသိရန်နှင်၊ပြည်သူများသိရန်၊ဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချနိုင်ရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလယ်သမားများလယ်ယာပြန်လည်ရရှိရေးမကြိုးစားရဲအောင် လယ်သမားများကိုထောင်များဆက်တိုက်ချရန် တရားသူကြီးများကိုဝန်ကြီးချုပ်၊ဦးသိန်းအောင်နှင့်၊အစိုးရအဖွဲဝင် များကညွန်ကြားထားကြောင်း မအူပင်၊ဝါးခယ်မ၊မော်ကျွန်း၊ကျိုက်လတ်၊လပွတ္ထာရှိတရားရေးဝန်ထမ်းများထံမှသိရကြောင်းလယ်သမားများကပြောနေကြသည်။မြန်မာအမျိုးသမီးအရေးဆောင်ရွက်သူများအားလုးံ(ပြည်တွင်း/ပြည့်ပ )ကိုချစ်ခင်လေးစားပါသည်။လယ်သမားများထောင်ကျပါကအဓိကအရင်ဆုးံဒုက္စရောက်သူများမှာမိန်ခလေးများပင်ဖြစ်ပြီး၊၎င်းတို့၏ဘဝလုံခြုံရေးပါဆုးံရှုးံနစ်နာရသဖြင့်ယခုလိုကိစ္စကိုတတ်စွမ်းသလိုကူညီဆောင်ရွက်ပါရန်နိုးဆော်ပါသည်။ ယခုလို ရှိစု မဲစု မိသားတစ်စုလုးံရှိမိန်းမများစပါးရိတ်၍အလုပ်ကြမ်းနှင့်ထောင်ချခြင်းမှာပထမဆုးံဖြစ်သည်။04250055 မော်ကျွန်းရဲစခန်း04250054 မော်ကျွန်းရဲတပ်ဖွဲမှူး04250101 မြိုနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး04250102 ။098599050 ဦးကိုကိုလွင် ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုစားလှယ်09422518330 ဦးအောင်ဇော်ခိုင် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်042 255319 ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး042 24570 ။042 23870 ။
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-31 03:12:04
DVB -30-10-2014 ကိုထင်ကျော်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ်ကျော်အပြစ်ပေးခံရ
DVB TV -30-10-2014 အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကိုထင်ကျော်ကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ ခ/၃၉ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချလိုက်ပီး ဆနပြမူ့ တွေအတွက် စုစု…
Posted on October 30, 2014 by Assistance Association for Political Prisoners (Burma)
Assistance Association for Political Prisoners (Burma)'s Facebook Wall 2014-10-30 13:36:54
ကိုထင်ကျော်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ်ကျော်အပြစ်ပေးခံရ
ကိုထင်ကျော်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ်ကျော်အပြစ်ပေးခံရ ******************************************************* အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကိုထင်ကျော်ကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ ခ/၃၉ နဲ့ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်ချလိုက်ပြီး ဆန္ဒပြမူတွေအတွက် စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်ကျော် အပြစ်ပေးခံထားရ ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြီးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။.Credit : DVB TV -30-10-2014.ပြန်လည်မျှဝေပေးပါတယ်လေးစားလျက်Martin Swe30-10-2014
John Erland, John Dale and David Kyle from Partnership for Change held the works…
John Erland, John Dale and David Kyle from Partnership for Change held the workshop, titled “Research on Social Business from around the world”, at AAPP office (Rangoon) on October 29, 2014. There were 37 participants and the workshop started at 10 am until3pm.
Partnership For Change အဖွဲ့မှ John Erland, John Dale and David Kyle
တို့သည် AAPP office(Ygn)ရုံးတွင် “Research on Social Business from
around the world” (ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူမှုစီးပွားရေးအပေါ် သုသေသနပြုခြင်း)
ခေါင်းစဉ်ဖြင့် (29.10.2014)ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပဲ တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ စိတ်ပါဝင်စားသူ စုစုပေါင်း(၃၇) ယောက်ရှိပါသည်။ နံနက် (၁၀)နာရီ
မှ နေ့လည် (၃)နာရီ ထိကျင်းပခဲ့ပါသည်။
"Research on Social Business from around the world" Workshop
Posted on October 29, 2014 by freeburma
ဗိုလ်ရှုခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ဦးတင့်ဆန်းမိသားစုပိုင် ACE ကုမ္ပဏီရ ==========…
ဗိုလ်ရှုခံအဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ဦးတင့်ဆန်းမိသားစုပိုင် ACE ကုမ္ပဏီရ
ဗိုလ်ရှုခံ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါမခေါ်ယူဘဲ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းမိသားစုပိုင် ACE ကုမ္ပဏီကို ပေးအပ်ရခြင်းမှာ အိမ်တော်ဝင်းနှင့် လွှတ်တော်ဝင်း တို့တွင် ဆောက်လုပ်ရမည်ဖြစ် သဖြင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပေးအပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န် ကြီး ဦးစိုးတင့်က လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ရှုခံ အ ဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရန် တင်ဒါမခေါ်ယူဘဲ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းမိသားစုပိုင် ACE ကုမ္ပဏီကို ပေးအပ်ရခြင်းမှာ အိမ်တော်ဝင်းနှင့် လွှတ်တော်ဝင်း တို့တွင် ဆောက်လုပ်ရမည်ဖြစ် သဖြင့် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ပေးအပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၀န် ကြီး ဦးစိုးတင့်က လွှတ်တော်တွင် ရှင်းလင်ြးေ…
via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/102kkog http://ift.tt/g8FRpY
Posted in Projects - စီမံကိန်းများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Projects, Recently Read	| Leaveacomment |
via The Irrawaddy’s Blog http://ift.tt/13bXMn1 http://ift.tt/1g3aTrt
Posted in LAWS - ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw, Military, Recently Read	| Leaveacomment |
ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာ သမ္မတအပါအ၀င်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက၊ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြားအရေးပါတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်အချို့နဲ့ တိုင်းရင်းနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့…
via Voice of America http://ift.tt/13bXUCY http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Cabinet - အစိုးရအဖွဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာ	| Tagged Cabinet, Feedly, IFTTT, Military, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted in Burmese Military - တပ်မတော်ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Laws, Luttaw, Military, Recently Read	| Leaveacomment |
Posted in Intelligence - နောက်ခံအကြောင်းအရာ ဆိုင်ရာ	| Tagged Feedly, IFTTT, Intelligence, Projects, Recently Read	| Leaveacomment |